Ny eo tsy voatsara: sokatra miisa 7 347 hafa indray, tratra tany Toliara | NewsMada
Ny eo tsy voatsara: sokatra miisa 7 347 hafa indray, tratra tany Toliara
Tsy misy fitsaharany mihitsy! Raha variana amin’ny fampielezan-kevitra ny mpanao politika sy ny mpitsiriritra fahefana, mitohy tsy ankijanona ny halatra sy trafikana sokatra any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy. Omaly, fantatra fa nisy sokatra miisa 7 347 be izao indray, tratra tany Ihotry, kaominina Tongobory, distrika Betioky Atsimo, faritra Atsimo Andrefana. Voasambotra niaraka tamin’ireo ny olona telo ary efa notazonin’ny mpitandro filaminana hatao fanadihadiana.
Manakaiky an’ilay maherin’ny 10 000 tratra, hiakatra fitsarana, anio, ireto sokatra hafa tratra ireto. Midika izany fa resaka tambajotra matanjaka mihitsy ny ao ambadik’izao trafika izao, toy ny andramena teo aloha ihany. Tsy nisy famaizana mafy ny olona tratra, sady azo adika fa tsy mandeha lalina ny fanadihadiana. Antony, raha raisina amin’ilay raharaha sokatra miisa 10 196, hotsaraina anio any amin’ny fitsarana Toliara, olona telo ihany ny voarohirohy, ny tompon’ilay trano nahatrarana ny sokatra sy ny mpiambina ny tanànany miisa roa. Aiza ny fanadihadiana lalina mikasika ny mpividy, na ny mpandray ny sokatra, ny mpisambotra azy ireny anaty ala, sns? Araka ny efa notaterina teto, omaly koa, mahavariana raha amin’ny raharaha mafana toy izao no ahitana fa “mpivady ny mpitsara ny raharaha sy ny mpisolovava ny voampanga”.
Ankoatra ity raharaha ity, misy Sinoa roa voarohirohy amin’ny resaka trafikana sokatra ihany koa, hiakatra fitsarana, anio any Toliara.
Aondrana any ivelany
Raha ny fifanakalozan-kevitra hita any anaty tambajotra sosialy amin’ny fifandraisan-davitra, voalaza fa avy any Androka, avy any Itampolo ny fiavian’ireo sokatra misy mangalatra any Toliara. Voalaza koa fa avy any amin’ny faritra Androy ny ankamaroan’ny sokatra tratra any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Mangataka fiaraha-miasa ny fitantanam-paritry ny Tontolo iainana sy ny ala any amin’ireo faritra roa ireo.
Tsy vao izao ity halatra sokatra anarivony any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy ity. Azo lazaina fa taorian’ny trafikana andramena, nirongatra ny halatra lavanila ary tranga fahatelo mamohehitra ity trafikana sokatra ity indray. Ny itovizan’ireo telo ireo koa, samy aondrana any ivelany avokoa ary hita fa any Sina, na Azia ny sokatra. Maro ireo tratra teny amin’ny seranam-piaramanidina, na saron’ny ladoany any ivelany, saingy tsy hita mivaingana ny famaizana azy ireny, afa-tsy ny famerenana ny sokatra any amin’ny toerana niaviany.
Maro ny fivoriana sy atrikasa natao, nilazana fa atambatra ny hery, horaisina ny andraikitra, saingy tsy hita ny vokatra. Azo ampitoviana amin’ny raharaha andramena ihany, tsy nahitam-bokatra, hatramin’izao, ny famaizana ny meloka.